‘Namichi diimaa wayyaa adii uffatu’ namicha ‘du’e turen’ maal jedhe? - BBC News Afaan Oromoo
‘Namichi diimaa wayyaa adii uffatu’ namicha ‘du’e turen’ maal jedhe?
Image copyright W/K Aanaa Sibuu Siree
Godina wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Siree Ganda Lalisaatti namichi tokko erga du'e jedhamee saanduuqa reeffaa keessa galfamee sa'aatii shan booda of baree ka'e jedhu maatiin BBC'tti himan.
Namni maqaan isaanii Hirphaa Nagaroo jedhamaniifi abbaa ijoolle shanii ta'an gaafa Kibxataa ganama du'uu maatiin ni himu.
Ollaanis dhaga'e, qawweenis dhukaafame, dunkaannis bu'ee osoo boo'aa jiranii garuu wanti isaan hin eegne ta'e.
Waggootii sadiif, keessumaa ji'oota sadan darban manneen yaalaa Naqamteefi fi Xiqur Ambassaatti yaalama turanis itti furuu dhabuu dubbatu. Egaa isa booda kan kuni dhalate.
"Gaafa Billoo [Kibxata] naannoo saatii 3:30 irrattan dadhabe. Isaan booda warra na bira jiranitu beeka malee ani waantan ta'e hin yaadadhu," jedhan.
Obbo Hirphaan akka BBC'tti himanitti yeroo of baran namoonni naanna'anii taa'aa akka jiraniifi daasiin ijaaramee argan.
"Bakkan deeme sanatti natti cufamee yeroon deebi'u gurrikoo banamee nama tokko boo'aa jirun dhaga'e. Yeroo kanan kafana narra jiru qubakoorraa kuteetan isaan booda gaafan ukkaamamun afaan koorraa hiikkadhe.''
Filatamuu Aadde Birtukaan irratti maaltu jedhamaa jira?
Akka kafana harka isaanitti hidhame hiikkatan kan uuruu isaanii ukkaamse ofirraa kaasaniin booda gurri isaanii sagalee namaa dhaga'anis Obbo Hirphaan, dubbachuu hin dandeenye ture jedhu.
"Gurri koo ni dhaga'aa garuu afaan koo didee didee gaafa na rakkisu, isaan booda waanta naaf dhufe hin beeku 'namni hin jiru ijoolle' jedheen takkaa dubbadhe achi keessatti."
Sagalee erga dhageessifatan booda saanduuqa irraa bananii baasanis hanga saatii 12'tti sirriitti of baranii namoota adda akka hin baafanne dubbatu.
Maatiin maal jedhan...?
Nama 'du'aa ka'e' jedhame kanaaf wasiila/abbeera kan ta'an Obbo Ittaanaa Qana'aa dhukkubsatanii Hospitaala Xuqur Ambassaatti wal'aansarra turanii Kibxata darbe ganama sa'aatii afur irratti qe'eetti lubbuun Obbo Hirphaa Nagaroo darbuu dubbatu.
"Erga du'een booda sa'aatii shan irratti kafanne saanduuqa erga galchinee booda waaree booda saatii 9:30 irratti ammoo achi keessaa dudubbatee jennaan baasne," jedhan Obbo Ittaanaan.
Saanduuqa keessaa sagalee 'namni hin jiruu, namni hin jiru' jedhu dubartoonni itti dhiyoo jiran dhaga'an isa waamuu dubbatu.
"Yeroo ani dhaqee irraa banu kafana gara fuulaafi harka isaa jiru ofirraa ciraa jira," jedhan.
Durumaan hin duunee gaaffii jedhu yeroo deebisan Obbo Ittaanaan, "Maali akkam hin duune ani nama shantama jaatama kafaneera" jedhu.
"Isayyu nama dhabeen gara walakkaa sa'aatii lafa tursiisee booda kafanee naannoo sa'aatii tokkoo booda ture kan saanduuqa galchine," jedhan.
Akka Obbo Ittaanaatti ilmi obboleessa isaanii kuni ifumatti du'ee ka'e.
Erga du'e boodas "akka aadaa keenyaatti namni yaa'ee, rasaasni lama dhuka'ee namni saatii sadii hanga afur boo'aa oolee ganama nutti deebi'uuf gara manaatti galeera," jedhan.
Yeroo sagalee nama du'ee ture sana dhaga'an gammachuudhaan baasanii sireerra kaa'anii akka uffata jijjiiraniif dubbatanii, yeroo sanatti garri mataafi miilla isaa qorraafi kan hin sochoone ture, ''hafuuruma qofatuu itti deebiye'' jedhan.
Jalqaba garuu yeroo isaan socho'uu isaanii dhagahan, namoonni hammeenya turan baqachuu himu.
''Anillee homaayyuu hin jenne warrikaan baqachaa turani. Saaxinii keessaayyuu naafuudhuu didani baqachaa turani.''
Saayinsiin fayyaa maal jedha?
Namni du'e tokko deebi'ee ni ka'a kan jedhu saayinsii fayyaa keessatti fudhatama hin qabu kan jedhan ogeessi fayyaa Dr. Birraa Laggasaa, namni tokko du'uu isaa waa sadiin mirkanaa'uu danda'a jedhu.
Tokko, qaroon ijaa (geengoon isheen gurraattii ija gidduu jirtu) kan ija lamaanii yoo babal'ate, (bilaterally dilated pupils) fi wayita ifaa itti ibsanis deebii hin kennu yoo ta'e.
Lammata, qaamoleen hargansuu nama sanaa hundi sochii yoo dhaaban (no respiratory movement) fi sadaffaa irratti, namni sun guutummaatti rukuttaa ykn sochii onnee hin qabu yoo ta'e (no chardiac activity) namni tokko du'eera jedhama jedhan.
Namni amma du'eera jedhame kun of wallaaluu baay'ee gadi fagoo ta'e (deep comma) keessaa galee ta'uu mala jedhu Dr. Birraan.
Namni 'deep comma' keessa gale tooftaawwan armaan olii sadan kanaan hanga hin mirkanoofnetti kan du'e fakkaachuu mala kan jedhan ogeessi kun waa'ee nama kana wanti adda ta'e yaala fayyaa malee 'deep comma' kana keessaa dammaquu isaati jedhu.
Yaala fayyaa malee 'deep comma' keessaa dammaquun waan yeroo mara mudatu ta'uu baatus darbee darbee haalli itti mudachuu danda'u jiraachus himu.
Du'anii maal argan?
"Namoota lubbuudhaan godaananitu jira. Isaanitu karaa na agarsiisaa na dura deemuu, nan qaqqabadhan jedhaa, nan deemaa nan qaqqabadhan jedhaa garuu bira ga'uu dadhabeen keellaan natti cufame."
"Ani bakkeettan hafee namicha diimaa wayyaa adii uffatu tokkotu isaanitti barrii cufee anaan diidatti hambisee jennan ani qophaa koo ta'een bakka koo duraatti deebi'e," jedhan.
Deebitanii dhufuu keessanitti ni gaabbituu gaaffii jedhuuf, " Maalan gaabbaree Waaqayyoon biyya lafaarra labsaa hanga dandeettii koo," jedhan.
Miirri namootaa gaddarra turanii akkam ture...?
Miira namootaas yeroo ibsan Obbo Ittaanaan, "Namoonni gammachuudhaan of wallaalan, inni kaan ni kukufee, inni kaan ni daa'imee, Waaqayyoof galata galchanii ilaaluu qofa malee maaltu jedhama. Kan jedhanitu dhibe!"
Obbo Ittaanaan umurii isaanii har'a 68 ga'aa jiran kanaan waan akkasii namni du'ee ka'uu arganiis ta'e dhaga'anii akka hin beeknellee BBC'tti himaniiru.
Ilmi obboleessa isaanii du'ee ka'e kun erga du'ee ka'ees waan arge dhugaa ba'uu dubbatan, Obbo Ittaanaan.
Namichi miseensa raayyaa ture hidhaa waggaa 5,160 adabame
"Milikkita Waaqarraan warra du'an keessaa namoota sadiitu dhufanii na waamanii na fuudhanii deeman. Gaafan achi ga'u ammoo namichi wayyaa adii uffate tokko dhufee maal gochuuf fiddanii dhuftan jedhe. Kanumaanan deebiyee dhufe. Haalli achii, qilleensi isaa mijataadha, waan dinqiidha jedhee dubbata," jedhan.
Erga du'anii ka'an jedhaman booda nyaata nyaachuullee eegaluu isaaniifi abdii horachuu isaanii BBC'tti himaniiru.
Waggoota sadii darbanif Obbo Hirphaan akka jedhanitti haalaan dhukkubsatan. ''Du'a gayii hin dhaqu, gabaa hindhaqu, danda'ee hojii hin hojjetadhu,'' jedhu.
Sababa kanaan, guddaa miidhamuun isaanii fuula isaaniirraa beeksisa. Erga ji'a sadiiti midhaan ''akka hin duunetti nyaata malee hinyaatu'' jedhu Obbo Ittaanaanillee.
Amma garuu erga gaafa dheengaddaati fooyya'uu isaanii dubbatu.
''Baay'ee fooyya'eera foonumakootti deebi'uu dadhabe malee. Lafeenkoo bakkee jira. Taa'uu hin danda'u. Cinaachaan cisuu hindanda'u. Isatu nadadhabse amma.
''Kaleessa ganama mooqa fudhadheera, firfiriis afaan na ka'aniiru. Duraan wanta qullubbii fakkaate yeroon fudhadhee jedhe natti dukkaneessee lafaan nadhaha. Amma garuu, inni duraan natti hadhaa'u natti mi'aawaa jira,'' jechuun BBC'f himaniiru.